कहाँबाट आयो काँग्रेस नेता बस्नेतको खातामा ६१ करोड ? खास खुलासा — Motivatenews.Com
कहाँबाट आयो काँग्रेस नेता बस्नेतको खातामा ६१ करोड ? खास खुलासा
काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको खातामा एकाएक ६१ करोड रुपैयाँ देखिएपछि राजनीतिक बजार एकाएक तात्यो । महाबौद्धमा रहेको प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको खातामा एकाएक ६१ करोड रुपैया डिपोजिट भएपछि त्यो पैसा कहाँबाट आयो रहस्यको विषय बनेको छ ।
अहिले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । महाबौद्धमा रहेको प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बस्नेतको खातामा ६१ करोड कालो धन फेला परेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको निगरानी बढेको हो ।
बस्नेतको कालोधनका बारेमा शुद्धीकरण विभागका साथै सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले पनि काम गरिरहेको बुझिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको निकाय हो ।
विभागले कसलाई कारबाही अगाडि बढाउने भनेर सोझै प्रधानमन्त्रीको राय लिन्छ । बस्नेतको ६१ करोडको स्रोत नखुलेको पैसाका बारेमा उनका परिवार र नातेदारमा पनि अनुसन्धान तीव्र पारिएको विभागले जनाएको छ ।